अर्ल्ल: कसरी रेफरल ट्राफिकले तपाईंको डेटालाई असर गर्छ
रेफरल ट्राफिक के हो? किन महत्त्वपूर्ण छ? खैर, जैक मिलर, वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक सेल्टल्ट , बताउँछ कि रेफरल ट्राफिक यातायातको खण्ड भनेको अर्को साइट मार्फत तपाईंको साइटमा ल्याइएको हो। स्रोत अर्को डोमेनबाट लिङ्क हुन सक्छ। Google Analytics ले तुरुन्तै जान्छ कि वेब ट्राफिक तपाईंको साइटमा ल्यान्डिंग गर्नु अघि थियो। जस्तै (यो Google Analytics) यी वेबसाइटहरूको डोमेन नामहरू यस रिपोर्टहरूमा रेफरल ट्राफिक स्रोतको रुपमा देखाउँदछ।
रेफरल ट्राफिक बहिष्कार गर्दा तपाईंको डाटाले कस्तो प्रभाव पार्छ?
यो पूर्वनिर्धारित रूपमा हो कि रेफ्रर्स स्वचालित रूपमा नयाँ सत्रहरू ट्रिगर गर्नुहोस्। यद्यपि, जब तपाइँ कुनै पनि सन्दर्भ स्रोत बहिष्कार गर्न रोज्नुहुन्छ, त्यसपछि बहिष्कृत डोमेनबाट वेब ट्राफिकले नयाँ सत्रहरू ट्रिगर गर्दैन। स्पष्ट रूपमा, यदि तपाइँ नयाँ सत्रहरू ट्रिगर गर्नको लागि रेफरल ट्राफिक चाहनुहुन्छ भने तपाईंले यस बहिष्करण सूचीमा डोमेनहरू समावेश गर्नुपर्दैन।
माथिको परिदृश्यबाट, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि रेफरलहरू नयाँ सत्रहरू ट्रिगर गर्दछ, रेफरलहरू बिना, त्यसपछि यसले यसले तपाईंको सत्र कसरी गणना गरिन्छ भन्ने असर गर्दछ। यो अन्तरक्रिया तपाईं सन्दर्भ रेन्डर गर्ने कसरी निर्भर गर्दछ एकाउन्ट वा धेरै सत्रहरूको रूपमा गणना गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, प्रयोगकर्ताले mysite.com मा तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्दछ; तपाइँकोite.com पछि mysite - dominio sistemas erro 100.com मा जानुहोस्। यदि तपाईंले आफ्नो वेबसाइट (yoursite.com) बहिष्कार गर्नुभएको छैन भने, त्यसपछि दुवै सत्रहरूको गणना गरिन्छ। एक पल्ट हरेक पल्ट त्यो mysite.com मा जान्छ। यदि अर्कोतर्फ, तपाईंले yoursite.com लाई बहिष्कृत गर्नुभयो भने केवल एक सत्र ट्रिगर गरिनेछ। यो सन्दर्भमा रेफरल ट्राफिक बिना कसरी प्रभाव पार्छ तपाईंको सत्रको गणना गरिन्छ।.
सन्दर्भ बहिष्करणको साधारण अनुप्रयोग
तेस्रो पार्टी भुक्तानी प्रक्रियाको लागि
क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग
तपाईलाई यस तथ्यको बारेमा जानकारी हुनुपर्दछ कि डोमेन र यसको उप डोमेनबाट वेब ट्राफिक मात्र हटाउन सकिन्छ। डोमेन-उप-स्ट्रिंग म्याकसँग ट्राफिक छैन।
उदाहरणका लागि, यदि तपाईं website.com बाट रेफरल ट्राफिक बहिष्कृत गर्नुहुन्छ भने, डोमेन वेबसाइट.com र उप डोमेनबाट वेब ट्राफिक अर्को .website.com निस्क्रिय गरिएको छ। वेब ट्राफिक अर्को-website.com बाट तथापि छैन।
रेफरल बहिष्करण सूची कसरी बनाउने?
आफ्नो Google Analytics खातामा साइन इन गरेर सुरू गर्नुहोस्
'व्यवस्थापक' मा क्लिक गर्नुहोस
तपाईँको खाता कलममा ड्रप डाउन मेनु प्रयोग गरी, एउटा सम्पत्ति चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं tweak चाहनुहुन्छ
ट्र्याकिंग-जानकारीमा क्लिक गर्नुहोस्
सन्दर्भ-बहिष्करण सूचीमा क्लिक गर्नुहोस्
डोमेन नाम थप गर्नुहोस् त्यसपछि आफ्नो सूची सिर्जना गर्नुहोस्
परिवर्तनहरू सुरक्षित गर्नुहोस्, र तपाईं जान्नुहुन्छ राम्रो
बहिष्कार सूचीबाट कसरी डोमेन हटाउने?
यदि कुनै कारणको लागि सर्वोत्तम रूपमा तपाइँलाई डोमेनलाई हटाउने सूचीबाट हटाउन पुन: पत्ता लगाउनको लागी त्यसपछि तपाइँ सजिलै संग यो गर्न सक्नुहुनेछ। उपरोक्त चरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् सानो विवरणको बाहेक - एक सन्दर्भ थप गर्नु भन्दा यसलाई हटाउनुहोस्। डोमेन हटाउन क्लिक गरेर समाप्त गर्नुहोस् त्यसपछि परिवर्तनहरू सुरक्षित गर्नुहोस्।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको बहिष्करण सूची यसलाई परीक्षण गरेर काम गर्दैछ। विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई Google को ट्याग सहायक रेकर्डिङ प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछ। यसले तपाईंलाई के बताईएको छ कि के बाहिर छ र कुन छैन।
कहिलेकाहीं यातायात तपाईंको अझै पनि रिपोर्टमा देखा पर्दैन। यो हुन सक्छ किनभने:
प्रयोगकर्ताहरू बहिष्कार सूची सिर्जना गर्नु अघि तपाइँले आफ्नो साइटमा भ्रमण गर्नुभयो
उनीहरू बुकमार्कहरू प्रयोग गर्न सक्थे